Iindaba - i-3D yobugcisa bodonga lwensimbi (2)
Ubugcisa bodonga lwensimbi lwe-3D (2)
Ubugcisa bodonga lwentsimbi yealuminiyam Iya isanda ngokwanda, kwaye abantu abaninzi bathatha isigqibo sokuphucula igumbi labo lokutyela, amagumbi okuhlala, njl.
Awunakho nokucinga ukuba zingaphi izinto ezipholileyo ezinokwenziwa ngealuminium. Ingaba ngumhlobiso omncinci okanye ubugcisa obukhulu bodonga, obugubungela udonga lonke. Ngaphaya koko, izinto zealuminium zizixhobo zendalo yonke zokuhombisa udonga njengoko zilungele phantse naliphi na igumbi kunye nolunye umbala. Kupholile ngenene ukuba unayo3D yobugcisa eludongenieludongeni olwenziwe nge-aluminium emsulwa, kuba ijongeka ngathi iyamenyezela kwaye xa yenziwe kakuhle. Ingcezu yobugcisa eludongeni inokutshintsha ngokupheleleyo iatmosfera kunye nomoya kwigumbi oceba ukubeka kulo.
Kwisibonelelo sethu, uya kufumana yonke into oyifunayo, iintlobo ezahlukeneyo ze Ubugcisa be-3D yentsimbi kunye neepateni ezininzi, ke wonke umntu uya kufumana into ekufaneleyo.
Zonke izinto ezenziwe ngodonga ngesinyithi kulula ukuzifaka kwaye zihlala ixesha elide. eyona nto intle kukuba zilunge ngokugqibeleleyo nakweliphi na igumbi olifunayo.Zongeza isitayile esifanelekileyo esihambelana nomoya wakho okanye noyilo olukhethileyo. Ukusukela, imihla ngemihla ubugcisa bodonga lwesinyithi Iya ithandwa ngakumbi, musa ukuchitha ixesha, kwaye usendleleni yokukhetha ezinye kwiwebhusayithi yethu.